iPhone, iPod Touch တွင် ယူ​နီ​ကုဒ် font နှင့် ဇော်ဂျီ font ၂ မျိုး​လုံး​ထည့်​သုံး​နိုင်​ပြီ - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
iPhone, iPod Touch တွင် ယူ​နီ​ကုဒ် font နှင့် ဇော်ဂျီ font ၂ မျိုး​လုံး​ထည့်​သုံး​နိုင်​ပြီ
Posted by ranka on March 10, 2011 at 11:30am
တကယ်​တော့ ၂ မျိုး​မက မိမိ​စိတ်​ကြိုက် ထည့် ထား​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ Jailbreak လုပ်​ပီး​သား iDevice တွေ​မှာ ထည့်​သွင်း ရ​တာ​ပါ။ bytaFont utility ကို​အသုံး​ချ​သွား​မှာ​ပါ။ နည်း​လမ်း ကတော့.....
၁။ Cydia ကို​ဖွင့်​ပြီး Search မှာ bytaFont လို့​ရိုက်​ထည့် ပါ။ အဲ​ဒီ bytaFont ပေါ်​လာ​ရင် နှိပ်​ပြီး install လုပ်​သွား​ပါ။
၂။ install ပြီး​သွား​ပေ​မယ့် သူ့​မှာ ဘာ Font မှ​ထည့်​မ​ထား​တာ​ကို တွေ့​ရ​မှာ​ပါ။ အရင်​ဦး​ဆုံး Original Font ကို​ထည့်​ပါ​မယ်။ Original Font ကို Restore ပြန်​လုပ်​ချင်​ရင် လုပ်​လို့​ရအောင်​ပါ။ ကဲ​အဲ​ဒီ​တော့ Cydia ကို​ဖွင့် Sections-> Fonts ကို​ရွေး​ရင် bytaFont မှာ ထည့်​သုံး​နိုင်​တဲ Font စာရင်း​ကို A-Z ပြ​ထား​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ဘေး​က index မှာ "O" (အို) နေရာ​ကို မှန်း​နှိပ်​လိုက်​ပါ။ Original Fonts iOS 4.0, 4.1, 4.2 သုံး​မျိုး တွေ့​ရ​မှာ​ပါ။ ကိုယ့် version နဲ့​ကိုက်​ညီ​တဲ့ ဟာ​ကို ရွေး​ပီး install လုပ်​သွား​ပါ။
--- မြန်မာ Font တွေ​ထည့်​ဖို့​ပဲ​ကျန်​တော့​တယ်---
၃။ Cydia -> Manage -> Sources ကို​သွား Edit နှိပ် Add နှိပ် http://cydia.myrepospace.com/suntun/ ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
မိမိ version နဲ့ အဆင်​ပြေ​တာ​ကို ရွေး​ပြီး install လုပ်​သွား​ပါ။ ဒါ​ဆို ပီး​ပါ​ပီ သုံး​ချင်​တာ​ကို ရွေး​သုံး​ရုံ​ပါ​ပဲ။
--- မိမိ​နှစ်သက်​ရာ​ကို ရွေး​သုံး​ရန် ---
၄။ bytaFont ကို​ဖွင့်​ပြီး သုံး​ချင်​တာ​ကို ရွေး message ပြ​ရင် Yes ပေါ့။ ခဏ​စောင့်​ပါ respring ( login / out ) လုပ်​ပီး​ရင်​အားလုံး​ပီး​ပါ​ပီ။
--- Restore ပြန်​လုပ်​ချင်​ရင် ---
၅။ bytaFont -> Advance က​နေ အောက်​ခြေ​နား​က Restore Original ကို​နှိပ်။
system UI အားလုံး​ရ​ပါ​တယ်။ ဇော်ဂျီ font မှာ အင်္ဂလိပ်​စာလုံး​ကို ပြောင်း​ထား​တယ်။
Comment by thetsoe on April 11, 2012 at 1:42pm previously, i can type myanmar font with my bluetooth keyboard but now, i cannot... pl help Comment by kawaiiko on October 19, 2011 at 2:14pm Yayyy... I got it.. But dont know how to type in zawgyi keyboard w iPad.. I can seedfont from this site too unlike from my computer.. Thank uuu Comment by kawaiiko on October 19, 2011 at 2:05pm ဒီဆိုဒ္က ျမန္မာေဖာင္႔ေတြကိုေကာင္းေကာင္းမျမင္ရဘူး... iPad 1 မွာ ျမန္မာ font သြင္းခ်င္တာ version ကို ၾကည္႔ေတာ႔ 4.3.3 (8J3) လို႔ေပၚေနတယ္ အဲဒါဆို ေလာေလာဆယ္ Cydia မွာ မရွိေသးဘူးဆိုတဲ႔ သေဘာလား သိခ်င္လို႔.. ျပီးေတာ႔ ဒီ site ကျမန္မာ ေဖာင္႔ျမင္ရေအာင္ ဘာေတြ download လုပ္ရမလဲ သိရင္ share ေပးပါခင္ဗ်ာ.. Thanks..alot Comment by leon on August 22, 2011 at 2:59pm Man.. It's pretty cool.. I can see status written in myanmar font on my ebuddy iphone.
Comment by ranka on March 16, 2011 at 11:00am သီးခံပါခင်ဗျာ။ ကျနော် package ၂ ခုတင်ပေးထားပါတယ်။ ၁ ခုက iOS 4.1 အထိသုံးလို့ရတာရယ် iOS 4.2 အတွက်ရယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် iOS 4.2 package က cydia ထဲမှာ ပေါ်မလာဘူး။ package index တူသွားလို့ ၁ ခုပဲ ပေါ်နေတာပါ။ အခု ပြင်လိုက်ပါပီ။ နာမည်ပါ ပြင်ထားပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
cyida -> changes မှာ Refresh လုပ်ရင် ရပါပီ။
Comment by minthike on March 14, 2011 at 9:10pm Thanks much Bro, i share this post @ myanmmarfamily.org
Comment by ranka on March 12, 2011 at 3:57pm @phyokyawaung
If you can done my procedure, you have already jailbroken.
here is you want http://www.htootayzar.com/myblog/2009/07/ornagai-english-myanmar-di... Comment by phyokyawaung on March 12, 2011 at 2:32pm I really thank this post.
I can do about that but I can't type myanmar fonts. How do I can type and want to know about iphone.
How to install dictionary and myanmar fonts. If you mind, you point me the website and say me.
I got iphone last2weeks. I don't know too much how about use the application.
Pls tell me thank all about ....... Comment by phyokyawaung on March 12, 2011 at 2:26pm HI brother!
I make your procedure, then I got myanmar fonts.
But I haven't myanmar typing in my phone.
Pls tell me and point the website. How to Jailbreak and How to install dictionary and applications......
I really want to know apple iphone. I used i phone these2weeks. So, I don't know too much knowledge about that. I can't ask anyone around for me.
Thankalot for this post ..... Comment by ranka on March 11, 2011 at 3:21pm Samsung Galaxy3support OpenType that I heard from googlecode Indian Language ‹ Previous